Misoro yeNhau, 09 Kubvumbi 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kubvumbi 04, 2019
Mapurisa anorova mutori wenhau we263 Chat, pamwe nekukanda zvombo zvehutsi hunokachidza mumahofisi e263 Chat muHarare.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kubvumbi 03, 2019
Kambani yeEconet yopinda muhurongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutumupengo nemafashamu eCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kuManicaland.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 02, 2019
Sangano reWorld Vision rinoti riri kuenderera mberi nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutumupengo nemafashamu eCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kuManicaland.
Misoro yeNhau Dzedu Dzanhasi Muvhuro Kubvumbi 01, 2019
Kunyange hazvo rubatsiro rwakaita sechikafu, mvura nezvimwe rwuri kunzi rwuri kuunganidzwa kubatsira vakawirwa nedambudziko reCylcone Idai kuManicaland, vakawanda vanoti havasati vawana rubatsiro urwu.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kurume 29, 2019
Mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu inofungidzirwa kuti yawanikwa kuChimanimani nembwa dzinofunidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuwanikwa kubva zvakarohwa nzvimbo iyi nedutumupengo Idai.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kurume 28, 2019
Motokari yemauto inonzi yauraya vanhu vatatu vange vachida kuti vapihwe chikafu mushure mekupedza mazuva akawanda vasina chekudya kuManicaland.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kurume 27, 2019
Masangano eEuropean Union neUnited Nations oenderera mberi nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai kuManicaland neMasvingo.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kurume 26, 2019
Vezvematongerwo enyika vopindira pamwe nekuvhiringa kugoverwa kwerubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai kuChimanimani neChipinge.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kurume 25, 2019
Gurukota rinoona nezvematunhu VaJuly Moyo vanoti vanhu zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe vashaya vanodarika mazana matatu nemakumi maviri nevapfumbamwe vasiri kuzivikana kuti varipi mushure memafashamu edutumupengo Idai vachiti kuparara kwemigwagwa kuri kunonotsawo rubatsiro.